Manadihady ny iCloud, Google Drive ary Dropbox | Vaovao IPhone
Manadihady ny iCloud, Google Drive ary Dropbox ny manampahefana italianina
Angel Gonzalez | | iCloud, About us
Fitsarana ary manam-pahefana mahay miantoka izy ireo fa ny orinasa tsy mihoatra ny fetra voafetra amin'ny serivisy. Maro amin'izy ireo no mifandraika amin'ny olan'ny tsiambaratelo, ny fifaninanam-pirenena ary ny fifaninanana tsy ara-drariny, ankoatry ny hafa. Ny andraikitry ny firenena na ny vondrona ambonimbony toa ny Vaomiera eropeana dia ny mamantatra, mamakafaka ary manolotra vahaolana amin'ireo olana ireo. Ora vitsy lasa izay dia fantatsika fa ny Fifaninanana sy ny Fahefan'ny tsena (AGCM) any Italia nanomboka nanadihady ireo rahona fitehirizana isan-karazany: iCloud, Google Drive, Dropbox. Ny tanjon'ny famotorana dia ny famaliana ireo fitarainana avy any fomba fanao tsy ara-drariny e fanitsakitsahana ny zon'ny mpanjifa.
iCloud, Google Drive ary Dropbox: nohadihadian'ny manampahefana italianina
Ny tanjona lehibe amin'ireto fanadihadiana ireto dia natomboky ny Fahefana misahana ny fifaninanana sy ny tsena (AGCM) Italia dia avo roa heny. Etsy ankilany, valio ny fitarainan'ny fifaninanana tsy ara-drariny avy amin'ny mpanjifa sy orinasa maro, ary etsy ankilany, ny fisian'ny fehezan-dalàna manararaotra amin'ny toe-javatra misy ankehitriny ny fifanarahana nosoniavin'ny mpampiasa rehefa misoratra anarana izy ireo ary manomboka fifanarahana amin'ny ny mpampiasa. serivisy.
Hay rahona fitehirizana telo ambanin'ny vera fanamafisana: Apple iCloud, Google Drive ary Dropbox. Indrindra, Google sy Apple nohadihadiana noho ny tsy fahombiazan'ny fampahalalana na ny tsy fahampian'ny famantarana amin'ny fampisehoana ny serivisy. Misy ihany koa ny antony manodidina ny fanangonana sy ny fampiasana ara-barotra ny angon-drakitra nomen'ny mpampiasa. Ho fanampin'izay, azo nomena ny fepetra nanangonana sy nampiasa fampahalalana ireo serivisy ireo raha tsy nahazo alalana avy tamin'ny mpampiasa.
Ho fanampin'izany, a fikarohana feno ny Terms sy ny fepetra isaky ny serivisy. Ny fisafotofotoana na ny tsy fisian'ny mazava dia mety ho fanalahidin'ny manampahefana italiana manapa-kevitra ny hanafika io andry io. Ireo no hevi-dehibe mifanohitra amin'ny fe-potoana sy ny toetoetran'ireo serivisy nanaovana famotopotorana:
Zon'ny orinasa ny mampiato ny serivisy amin'ny fotoana rehetra.
Ny serivisy rahona dia tsy azo omena tsiny noho ny fahaverezan'ny data.
Ny orinasa dia manan-jo hanova ny fepetra sy ny fepetra amin'ny fotoana rehetra.
Ny orinasa dia miantoka fa ny fifanarahana, ny fepetra ary ny fepetra amin'ny teny anglisy dia alohan'ny fiteny hafa, na dia tsy nanao sonia ny fifanarahana tamin'ny teny anglisy aza ny mpampiasa.
Ho hitantsika amin'ny farany ny fomba niafaran'ity fanadihadiana italiana ity, izay mety hiparitaka any amin'ny faritra hafa na hahatratra ireo faritra lava amin'ny famakafakana varotra ao amin'ny Vondrona eropeana.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Vaovao IPhone » Apple products » iCloud » Manadihady ny iCloud, Google Drive ary Dropbox ny manampahefana italianina
Manizingizina i Prosser fa hanana Apple Watch vaovao sy iPad vaovao izahay